China C-simbi inogadzirisa Vulcanizing Press yeRubber Belt Spot Kugadzirisa fekitori uye vagadziri | Antai
C-clamp Kugadzirisa Vulcanizing Press yeRubber Belt Spot Kugadzirisa
YXhydraulic banga kusvibisa kugadzira muchina, inozivikanwawo seC-kiramba gadziriso yekugadzirisa vulcanizer, ndizvo kudziyisa kwemagetsi kugadzira michina yebhandi rekutakura. Panguva bhandi rinopa, kumeso kwebhanhire kunogona kukuvara kana kuboorwa ne kuratidzaed zvinhu. Ipapo iyo banga kusvibisa kugadzira muchina inogona kushandiswa kugadzirisa.
Muchina uyu une furemu, mahwendefa maviri ekupisa, yakasanganiswa hydraulic lifter uye yemagetsi controbox. Iyo furemu inogadzirwa neakakwira-simba aruminiyamu chiwanikwa, icho’s smalsize, inotakurika, yakachengeteka uye yakavimbika. Muchina uyu unonyanya kushandiswa kugadzirisa zvishoma pane 300 * 300mm dot kukuvara.
Yakagadzirirwa kukurumidza kugadzirisa uye nyore kushanda pane kukuvara kwenzvimbo
Dhayetihezi dhizaini, ita maneuver ive nyore;
Chiedza uye chakakombama aluminium C-mhando furemu, yakakodzera kumisikidza yakakuvadzwa nzvimbo nzvimbo;
Kana iyo nzvimbo yekukuvara kwebhandi isina kunyanyisa kukura, kunge doti, gwapa kana simbi, haufanire kushandisa muchina muhombe kuigadzirisa. C-clamp spot kugadzirisa vulcanizing press ingadai iri sarudzo yakanaka. Lower bhajeti, asi gadzirisa dambudziko hombe.
Zviyero * L * W * H mm）
Bhandi vulcanizer inovimbika, isingaremi uye inotakurika muchina, uyo unoshandiswa zvakanyanya mumunda wesimbi, kuchera, magetsi, zviteshi, zvekuvakisa, simende, yangu yemarasha, indasitiri yemakemikari, nezvimwe.
Fambisa muchina kunzvimbo yekugadzirisa.
Zadza glue munzvimbo dzakakuvadzwa dzinoda kugadziriswa.
Isa furemu pasi pebhanhire uye urongedze pamwe nenzvimbo yakakuvadzwa.
Isa iyo yepasi yekupisa ndiro pasi peiyo yakanganisika nzvimbo yebhanhire uye wozoisa iyo yepamusoro furemu.
Dhinda iyo hydraulic lever kusvikira yasvika yakaringana kumanikidza mwero.
Unganidza iyo yekutanga tambo kune magetsi sosi uye yemagetsi kudzora bhokisi. Uye wobva wabatanidza iyo yechipiri tambo nebhokisi rekutonga uye epamusoro uye ezasi mahwendefa.
Batidza bhokisi rekutonga uye tanga iyo yekugadzirisa nzira yekugadzirisa.
Pashure: PU PVC Belt Vulcanizing Press ye Thermoplastic Belt Splice
Zvadaro: Rail-yakakwira Spot Kugadzirisa Vulcanizing Press yeConveyor Belt
Yakajairika Belt Vulcanization Press
Vc Bhandi Vulcanization Press